Iimaankaaga runta ah muuji!
ILAAHAY digniin buu addoommadiisa siiyay inay rumaysadkooda la tijaabin doono. Eraygiisu wuxuu yiri: “Soo jeeda, waayo, cadowgiinna Ibliiska ahu sida libaax ciyaya ayuu u wareegaa oo u doondoonaa cid uu liqo.” (1 Butros 5:8) Sidee buu Shayddaanku iskugu dayaa inuu iimaankaaga halleeyo?
Ka soo horjeed kan oo kale miyaad soo martay?
Shayddaanku wuxuu isticmaali karaa dad kale, xitaa dad gacalkaaga ah inay ku cadaadiyaan si ad marnaba u eegin Qoraalka Quduuska ah. Sidaas daraaddeed buu Ciise sii sheegay: “Nin cadowgiisu waa dadka gurigiisa.” (Matayos 10:36) Saaxiibbadaada iyo ehelkaaga malaha inay ku caawiyaan bay rabaan, laakiinse ma oga runta fiican oo laga helo Erayga Ilaahay. Ama iyagu waxay ka baqayaan waxay dadka kale is leeyihiin. Hase ahaatee Qoraalka wuxuu yiri: “Dadka ka cabsashadiisu wax bay dabtaa, laakiinse kii Rabbiga isku halleeyaa wuu nabad geli doonaa.” (Maahmaahyadii 29:25) Haddii ad tacliinta Qoraalka ku yaal joojisid inaad dadka raalligelisid, taasi Ilaahay may ka farxin doontaa? Maya! Laakiinse markaan iimaan run ah qabno, Ilaahay wuu ina caawiyaa. “Innagu ma ihin kuwa halaagga dib ugu noqda, laakiin waxaynu nahay kuwa rumaysad leh si naftu u badbaaddo.”—Cibraaniyada 10:39.
Ma xusuusan tahay qisadii ku saabsaneed waaya araggii Dumas. Ugu horreyn naagtiisii run u may qaadan iimaankuu qabay wayna ku qosli jirtay. Mar dambena iyagu waxay isla dhigteen Erayga Ilaahay. Sidaas oo kale haddii ad sii wadid oo ad ku adkaysatid wanaag sameyn, malaha saaxiibbadaada iyo ehelkaaguba way kugu dayan doonaan. Inta badan ehel rumaysad laʼaan ah baa eray laʼaan kuwa iimaanka runta ah soo raacay markay arkeen dabiicaddooda daahirka ah iyo ixtiraamkooda qalbiga ka yimid.—1 Butros 3:1, 2.
Shayddaanku wuxuu ka dhaadhacsiiyaa dadka inay waqtiba lahayn ay ku dhigtaan Qoraalka. Wuxuuna jeclaan lahaa inay waxay nolosha kugu kalliftay iyo lacag ka welweliddu hadalka Ilaahay ceejiyaan siduu iimaankaagu u noqdo mirolaʼaan. (Markos 4:19) Iska diid fekraddan bilaa mustaqbalka ah. Qoraalka wuxuu yiri: “Tanu waa nolosha weligeed ah inay ku gartaan, adoo ah Ilaaha runta ah oo keliya, iyo inay gartaan Ciise Masiix, kii aad soo dirtay.” (Yooxanaa 17:3) Runtii, waa muhim inaa barashada Ilaahay iyo Ciise Masiix ku saabsan la sii wado sida loo helo nolosha weligeed ah!
Ilaahay bari inuu ku caawiyo
Ka feker Muuse oo ka mid ahaa reerkii boqortooyada Masar. Hadduu doonayo wuxuu raadin lahaa maal, caannimo iyo awood. Laakiinse Muuse wuxuu doortay “in lala silciyo dadkii Ilaah intuu wakhti yar dembi ku farxi lahaa.” Waayo? “Wuxuu u adkaystay sidii mid fiirinaya kan aan la arkin.” (Cibraaniyada 11:24, 25, 27) Haa, Muuse si xoog leh buu Ilaahay u rumaystay. Wuxuu hormariyay Ilaahay danihiisa intuu damaca nafsaddiisa doondooni lahaa. Ilaahayna isaga si nimco leh buu u barakeeyay. Haddii ad sidaas oo kale yeeshid Ilaahay wuu ku barakeyn doonaa.
Shayddaanku wuxuu isticmaali doonaa waxyaalo badan siduu ku halleeyo. Laakiinse yuusan ku sirin. Ilaahay Eraygiisa wuxuu inagula taliyay: “Ibliiska hor joogsada, wuu idinka carari doonaaye.” (Yacquub 4:7) Sidee baad isaga u hor joogsan kartaa?
Barashada Qoraalka Quduuska ah sii wado. Maalin kasta Erayga Ilaahay akhriso. Baro tacliintiisa. Taladiisa ku soco. Haddii ad sidaas yeeshid waxaad noqon doontaa mid “hubka Ilaah qaata” si ad sharka Shayddaanka is hor taagtid.—Efesos 6:13.
Dhexgal dadka iimaanka runta ah haysta. Baadidoon kuwa kale oo akhrista, barta oona addeeca Qoraalka Quduuska ah. Kuwaasi midkoodba midka kale ayay ka fekeraan si ay iyagu isugu guubaabiyaan kalgacayl iyo shuqullo wanaagsan, oo ay midkoodba midka kale xoog u siiyaan. Iyagu way ku caawin doonaan sidaad iimaankaaga u dhistid.—Cibraaniyada 10:24, 25.
Dadka kale oo iimaanka runta ah haysta dhex gal
Yehowah u dhowow. Ilaahay caawimadiisa bari oo isaga aammin. Weligaa ha illoobin, Ilaahay wuxuu rabaa inuu ku caawiyo. “Welwelkiinna oo dhan [Ilaahay] saara, maxaa yeelay, isagu dan buu idinka leeyahay.” (1 Butros 5:6, 7) “Ilaah waa aamin, mana oggolaan doono in laydin jirrabo intaad karaysaan in ka badan, laakiin markii laydin jirrabo wuxuu samayn doonaa jid aad kaga baxsataan si aad ugu adkaysan kartaan.”—1 Korintos 10:13.
Shayddaanku wuxuu damcaa inuu Ilaahay ka caraysiiyo isagoo leh qofna Ilaahay uma adeegi doono markay dhibaato ku dhacdo. Laakiinse waxaad haysataa fursad ad ku caddeysid inuu Shayddaanku beenaale yahay. “Caqli yeelo,” buu Ilaahay yiri, “qalbigayga ka farxi, si aan ugu jawaabo kii i caayaba.” (Maahmaahyadii 27:11) Haa, goʼaan gaar sidaad u caddeysid inaad iimaan run ah leedahay!
Sidee buu Shayddaanku iskugu dayi karaa inuu iimaankaaga halleeyo?
Sidee buu Muuse u caddeeyay inuu iimaan run ah haystay?
Sidee baad u adkaysan kartaa marka iimaankaaga la tijaabiyo?
Wadaag Wadaag Iimaankaaga Runta ah Muuji!